Njikọ Egwuregwu Egwuregwu Egwu & Ndị na-eweta ya | China Elbow Surge Arrester Connector Factory
Anhuang ọkachamara na Elbow Surge Arrester, anyị na-enye nnukwu mma ikuku ikpu arrester. Ngwaahịa anyị kwekọrọ na IEEE386, na ụkpụrụ IEC. Okwu Mmalite: 17 / 50kV loadbreak Elbow Surge Arrester na ụlọ silicone roba njikọ ma wụnye ya na 200A Load break bushing extender. Dịka ọmụmaatụ, ọ na - echekwa netwọkụ na - ajụ, dịka ọmụmaatụ: ndị na - agbanwe ọkụ na - agbanwe eriri na eriri. Abata na ebili mmiri na ebili mmiri na ntụgharị site na ntụgharị uche pere mpe. Nkọwa nkọwa Nke na-aga n'ihu oper ...
24kV Loadbreak Egwuregwu Egwu Arrester
Anhuang ọkachamara na Elbow Surge Arrester, anyị na-enye nnukwu mma ikuku ikpu arrester. Ngwaahịa anyị kwekọrọ na IEEE386, na ụkpụrụ IEC. 34kV Ji Anya Arrester Fanye ọtụtụ-eji na-ajụ voltaji netwọk, dị ka nkesa mgba ọkụ Kwadobe na USB na ndị ọzọ na equipments. Nkọwapụta Ngwaahịa 1.EPDM INSULATION: Siri sọlfọ gwọrọ EPDM mkpuchi bụ agwakọta ma mepụta ụlọ maka njikwa zuru oke nke njirimara roba mkpuchi. 2.SEMI-KPỌTA SHIELD: Kpụrụ ọkara conducti ...
Anya oru Arrester Fanye
Anhuang ọkachamara na Elbow Surge Arrester Insert, anyị na-enye nnukwu mma Elbow Surge Arrester Insert. Ngwaahịa anyị kwekọrọ na IEEE386, na ụkpụrụ IEC. A na-ejikarị 17 / 50kV Na-emegharị Arrester Fanye n'ọtụtụ ebe na ntanetị dị nro, dị ka ndị na-agbanwe ọkụ na-agbanwe agbanwe na eriri na ndị ọzọ, jiri ya na ngwa ngwa nkwụsịtụ ngwa ngwa dị ka njikọ ikuku ikuku na mkpuchi mkpuchi. Nhazi ngwaahịa 1.EPDM INSULATION: Siri sọlfọ gwọrọ EPDM mkpuchi bụ agwakọta ma mepụta ...
35kV Shield Shied T n'azụ Jijiji Arrester
Anhuang ọkachamara na Deadbreak T Rear arrester, anyị na-enye nnukwu mma Deadbreak T Rear arrester. General ： 35 / 78kV European-style na-esochi arrester na-enye netwọkụ nchekwa nchekwa na-echebe nchekwa. iji ọta ekpuchitoro iji jide n'aka na onye ahụ nwere nchekwa yana akụrụngwa nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma, ha nwekwara ọnụ ọgụgụ dị elu iji jide n'aka na ha nwere ike ịrụ ọrụ n'ọnọdụ ahụ. 35 / 78kV European-style Elbow arrester nwere ike iji ya na njikọ njikọ Europe. Ngwa ...
Nwụrụ Anwụ T n'azụ Arrester
Anhuang ọkachamara na Deadbreak T Rear arrester, anyị na-enye nnukwu mma Deadbreak T Rear arrester. General ： 17 / 50kV European-style na-esochi arrester na-enye ọrụ nchebe a na-eche nche na-eche nche. iji ọta ekpuchitoro iji jide n'aka na onye ahụ nwere nchekwa yana akụrụngwa nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma, ha nwekwara ọnụ ọgụgụ dị elu iji jide n'aka na ha nwere ike ịrụ ọrụ n'ọnọdụ ahụ. The 17 / 50kV European-style Elbow arrester nwere ike iji ya na njikọ njikọ Europe. Kit gbụrụ ...